Majaladda MundoGEO ee hadda ku jirta kiniiniyada - Geofumadas
MundoGEO hadda magazine on kiniiniyada
Mee, 2012 Apple - Mac, Geospatial - GIS
MundoGEO, shirkadda wakiilka ugu sareeya beerta geospatial degaanka ee isgaarsiinta Latin American ayaa laba codsiyada magazine MundoGEO waxaa laga daawan karaa qalabka mobile, Apple macruufka iyo Android labadaba.
Kaliya sannadkan, majaladdan waxay ku biirtay waxyaabaha ku jira wargeysyada InfoGEO iyo InfoGNSSIntaa waxaa sii dheer, noocyo ku qoran Ingiriis, Isbaanish iyo Boortaqiis ayaa lagu soo daray. In kasta oo lagu arki lahaa Calameo, haddana iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad Flash ah ayaa ka horjoogsatay taleefannada gacanta inay helaan. Hadda, iyadoo la adeegsanayo HTML5, arrinta waa la xalliyay iyo waxa joornaalada ku jiheysan moobiilka ay ku sameeyaan kobcinta iyo fududaanta muuqaalka muuqaalka leh ee ay tahay inaad ku jimicsato jimicsi maadaama fallaaraha iyo waxyaabaha ku jira ay yihiin kuwa aan sidaa u muuqan.
Sida saaxiibkay Eduardo Freitas oo macnaheedu yahay:
Daah-of majaladda qaab kiniin ah waa tallaabo ka baxsan majaladda MundoGEO xagga keenidda siyaabo dhowr ah si aad u hesho beesha geomatics xiran.
Iyada oo xulashada kiniin ah, waxaan hadda u bixinnaa hab kale oo dadka si ay u bartaan oo u cusbooneysiiyaan xalalka geospatial iyo teknooloojiyada, laakiin hadda wax badan oo isdhexgal ah.
Codsiga waxaad ka raadin kartaa iTunes, kuwa isticmaala iPad ama ku jira Android dukaanka. Marka codsiga la rakibo, waxaad arki kartaa daabacaadda koowaad ee qaabkan loo dhigay. Waqti ka dib waxaan suuragal noqon doonaa inaan aragno kuwii hore inkasta oo arjigu dhowaan yahay, waxaan rajeyneynaa inuu ku xasilinayo culeyskiisa iyo foomka taageerada kahor noocyada cusub.
Qofkii raba inuu ka arko kombuyuutarka, ayaa sidoo kale suurogal ah http://mundogeo.com/mundogeo67/Halkee version ugu dambeeyay ee kaas oo ah salvageable iyo aad u faa'iido badan article Cesraa Lima, hadalka ku saabsan GPSPrune, mid ka mid ah dhawr horumartay barnaamijyada Java ogolaada in xogta GPS ka Linux hawlgalka muujiyey.
Waxa kale oo ay soo jiidataa dareenka IDE, oo hadda noqon doona qaybta joogtada ah ee hoos imanaysa magaca IDE # Connect.
Dhinaceena, waxaan ku soo dhaweyneynaa, adigoo garawsanaya saamiga shirkadaha sidan oo kale keenaya sii waaritaanka qaybta.
Soo rog codsiga iTunes.
Soo rog codsiga Android dukaanka.
Android ipad majallado
Post Previous" Hore Isku kalsoonow! Warqad ku socota wada shaqeeyahayga
Post Next Kuwa ku guuleystay abaalmarinta MundoGEO Award # Connect 2012Next »